Ọtụtụ ụmụ amaala UAE nọ n'ọnọdụ ọhụrụ na Emirates Airline
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Ọtụtụ ụmụ amaala UAE nọ n'ọnọdụ ọhụrụ na Emirates Airline
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • Akụkọ okomoko • Akụkọ na -agbasa na Morocco • Akụkọ gbasara Nepal • News • Akụkọ na -agbasa ozi Pakistan • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa Sudan • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Akụkọ Emirates bidoro na 1985 mgbe anyị ji ụgbọ elu abụọ malite ọrụ. Taa, anyị na-efe ụgbọ elu Airbus A380s na Boeing 777s kachasị n'ụwa, na-enye ndị ahịa anyị nkasi obi nke ụgbọ elu ọhụrụ na nke kachasị arụ ọrụ na mbara igwe.
Emirates taa ekwuputala ọtụtụ mmegharị onye isi azụmaahịa n'ofe West Asia, Africa, GCC na Central Asia.
Ndị otu isii nwere ọfụma na ọrụ idu ndú, ndị UAE niile, ga -enyere aka ịkwalite atụmatụ azụmaahịa nke ụgbọ elu gafee ahịa ndị bụ isi na -elekwasị anya n'ịrụzigharị ọnọdụ onye ndu ya na itolite ebe ndị ahịa ya ka mba na -aga n'ihu na -ebelata mmachi ha.
Nhọpụta ọhụrụ a niile ga -amalite na Septemba 1, 2021.
Kedu ihe kpatara ndị mba UAE ji weghara ọkwá ndị dị na Emirates ?
Emirates bụ ụgbọ elu UAE nke dị na UAE Emirates nke Dubai.
Mmegharị ahụ niile gụnyere ikike Emirati n'ime ọkwa ndị isi, ma ọ bụ na -akwalite site na nzukọ ma ọ bụ site na ntụgharị nke pọtụfoliyo, na -akwado ntinye aka nke ụgbọ elu maka mmepe ọrụ yana ọganiihu nke ndị mba UAE.
Ike ụlọ site n'ime akara Emirates
Adnan Kazim, onye isi azụmaahịa, Emirates Airline kwuru, sị:
'' N'ihi ike nke Akara Emirates, laser anyị na-elekwasị anya n'ịrụzu atụmatụ ndị ahịa na atụmatụ azụmaahịa, yana iwughachi netwọkụ anyị nke ọma dabere n'ọchịchọ a na-ahụ anya, ụgbọ elu ahụ nọ n'ọnọdụ nke ọma ogologo oge iji mepụta nsonaazụ ka mma ka anyị na-agagharị na mgbake. Mmegharị ndị otu azụmahịa etinyerela na -ewusi usoro nhazi anyị ike n'ahịa ndị bụ isi. Obi dị anyị ụtọ maka ịrụsi ọrụ ike na nraranye nke ụmụ amaala UAE họpụtara maka ọrụ ndị a egosila iji merie ihe ịma aka nke ọnwa 18 gara aga, ọkwa nke taa na -egosipụtakwa ntinye aka anyị n'iwulite ike bench n'ime. "
Emirates VP ọhụrụ na alaeze Saudi Arabia
Jabr Al-Azeeby họpụtara ka ọ bụrụ osote onye isi ala nke Saudi Arabia. Jabr nọ na Emirates afọ iri na isii, na -ejibu ọrụ onye njikwa obodo na Uganda, Saịprọs, Thailand, Pakistan, tupu ọ rụọ ọrụ kacha ọhụrụ dịka osote onye isi ala, India na Nepal.
Onye isi ala Emirates ọhụrụ na Pakistan
A họpụtala Mohammed Alnahari Alhashmi ka ọ bụrụ osote onye isi ala Pakistan. Mohammed enweela ọtụtụ ọrụ n'ime afọ iri na asatọ ya na Emirates, gụnyere ọkwa nchịkwa na Kuwait, Indonesia, Syria, UAE, na nso nso a ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi oche alaeze Saudi Arabia.
Onye isi ala Emirates ọhụrụ na India na Nepal
Mohammad Sarhan, onye jibu ọkwa osote onye isi ala Pakistan, ga -abụ osote onye isi ala, India na Nepal. Ozi mbụ nke Mohammad na Emirates bịara na 2009 na Cote d'Ivoire, na kemgbe ahụ ọ na -arụ ọtụtụ ọrụ iduzi azụmahịa na Vietnam, Greece, Thailand, Myanmar, na Cambodia.
Emirates onye njikwa obodo ọhụrụ na Iran
Rashed Alfajeer, onye njikwa Morocco, ga -abụ onye njikwa obodo Iran. Ọrụ Rashed na Emirates bidoro na 2013 dị ka akụkụ nke mmemme ọzụzụ njikwa azụmaahịa. Rashed emeela ọtụtụ ọrụ kemgbe ahụ, gụnyere onye njikwa azụmaahịa Sri Lanka, onye njikwa mpaghara Dammam na mpaghara ọwụwa anyanwụ na KSA, yana onye njikwa obodo Tanzania.
Emirates onye njikwa obodo ọhụrụ na Morocco
Khalfan Al Salami, onye njikwa obodo Sudan, ga -abụ onye njikwa Morocco. Khalfan sonyeere mmemme ọzụzụ azụmaahịa Emirates na 2015, wee gaa n'ihu na -aga n'ihu na Madrid tupu ọ rụọ ọrụ onye njikwa azụmaahịa na Kuwait. Kemgbe ahụ, ọ na -arụ ọrụ onye njikwa obodo na Sudan.
Emirates onye njikwa obodo ọhụrụ na Sudan
Rashed Salah Al Ansari, ga -abụ onye njikwa obodo Sudan. Rashed nọ na Emirates kemgbe 2017, na -ejide ọrụ Onye njikwa Nkwado azụmaahịa dị iche iche na Singapore na Jọdan.
Alain St. Ange, Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka kelere Rashed Salah Al Ansari na Khalfan Al Salami n'ọkwa ọhụrụ ha na Morocco na Sudan. St. Ange rụtụrụ aka na ọrụ dị mkpa nke Emirates nwere na Emirates jikọtara Africa na akụ na ụba, ọkachasị njem nlegharị anya na ụwa.
Naanị họpụtara onye nnọchi anya German na China na mberede ...
Mmụba okporo ụzọ maka ọdụ ụgbọ elu FRAPORT
Gọọmentị kwuwapụtara Mgbakọ na Njem Nlegharị Anya na ...
Air Canada dị njikere iji mejuputa amụma ịgba ọgwụ mgbochi ọhụụ
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica na -akasi ezinụlọ ya obi ...
Israel machibidoro ụmụ amaala na-enweghị ọgwụ mgbochi na Ọha ...
Ezumike akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ niile: maka ezinụlọ niile!